Longreach Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - Queensland, i-Australia | Airbnb
Ukuqasha kokuvakasha e-Longreach
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Longreach
Siyisiteshi sezimvu esisebenza ngokugcwele esinikeza indawo yokugqwala kodwa ethokomele kakhulu yokugunda indawo yokuhlala ukuze ivumelane namaculo, imibhangqwana noma imindeni. Asinazo izindawo zokufinyelela ezikhubazekile kulesi sigaba. Izindlu zokugezela ezihlanganyelwayo, ikhishi nezindawo zokuhlanza izingubo. Ikamelo ngalinye line-air-conditioning yalo. Ukugunda okungokoqobo, okungokwesiko ngaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo ukuya endaweni yokuhlala kanye ne-airstrip yangasese.
Amasevisi athandwayo ase- Longreach ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Longreach
Julia Creek250 mi
North Queensland187 mi
Charters Towers City266 mi
Charters Towers266 mi
Richmond Hill267 mi